Taariikhda Jonathan Pitropia - BBC Somali
Taariikhda Jonathan Pitropia
Suurtagalnimada Jonathan Pitroipa in uu ku soo baxo abaalmarinta sanadka ee BBC-da waxa ay aheyd mid fog ka hor inta uusan bilaabanin Koobka Qaramada Qaarada Africa markaasoo Burkina Faso ay la Group noqotay Zambia iyo Nigeria.
Kooxda waddanka Burkina Faso waxaa u suuragashay in ay ka guuleystaan kooxda qaranka Zambaia ee Chipolopolo oo difaacanyey koobka Qaramda Qaarad Africa. Sidoo kale waxa ay ka dhibca bateen kooxda wadanka Nigeria.
Kooxda The Super Eagles ee Nigeria ayaa markii dambe ka raayey kooxda qaranka ee Burkino Faso ciyaartii kama dambeeysta ahayd. Sidaas ooy tahay ciyaaryahan Pitroipa ee kooxda Burkino Faso ayaa loo codeyey ciyaaryahanka tartanka ugu wanaagsanaa badalkii lasiin lahaa ciyaaryahan Nigeria ka socdo.
Ciyaaryahankan baalaha ka dheela waxa uu ahaa cayaaryahan muhiim u ah kooxda waxa uuna suurgaliyey in ay bar-baro noqodaan ciyaartii furitaanka kooba oo ay la caayareen kooxda Nigeria ee markii dambe guushu raacday. Hormar ayuu ciyaaryahanka sameyey markii la isugu yimid ciyaartii xigtay isagoo dhaliyey laba gool ciyaayraatii dhamxmartay iyaga iyo Itoobyia oo ay uga raayeen Itoobiya 4-0.
Taasi waxa ay aheyd guushii ugu horeysay ee kooxda Burkino Faso ay ka soo hoyiso cayaaraha koobka Qaramda Qaarad Africa tan iyo sanaddii 1998-dii markaasoo ay martigaliyeen koobka oo ay ka mid noqtay afartii ugu dambeeysay ee isku soo haray.
Ghana Waxaa ay ka reysay kooxda Burkino Faso Balse xiddigii hore ee kooxda Hamburg saameyn weyn kuma yeelanin ciyaarta iydoo Burkino oo daalan looga raayey 1-0
Si kasataba, Waxa uu kooxda Burkino u ahaa ciyaaryahan muhiim ah markii ay bilaabatay isreebreebka loogu soo baxayay ciyaraaha adduunka. Kooxdiisa lagu naaneyso Stallions waxa ay hoggaamineysay Group-ka ay ka tirsaneyd inkastoo tartanku uu ku adkaa billawgii. Waxa uu dhaliyeey gool muhiim ah oo horseeday in ay 3-2 kaga adkaadaan kooxda Algeria.
Heerka horyaalada, Pitroipa waxa uu xilli ciyaaradka sanaddii 2012-13 uu dhaliyey 7 gool kooxdiisana waxaa ay ku dhamaysay kaalinta 13-aad sidoo kale waxa ay gaareen markii ugu horeysay ciyaarta kama dambeyta ah ee koobka French League Cup
Balse waxa ay ciyaartaasi guusha ku racaday kooxda St Etienne.
Weriyaha Cayaaraha BBC Piers Edwards
Ma jiro ciyaaryahan u dhashay Burkina Faso oo ku soo dhawaaday in uu ku guuleysto abalrmainta ciyaaryahanka sandka ee Africa balse Jonathan Pitroipa waxa uu noqon doonaa mid u qalmo hadii uu helo.
Waxa uu si wanaagsan uga dhax muuqday tartamada koobka qaaarada Africa, waxaana loo magacaabay ciyaaryahanka Afrika ugu wanaagsan. Waa ciyaryahankii ugu horeeyey oo u dhashay Burkino Faso oo darajadaasi gaara.
Waa muhiim in aan xusno in kooxda Burkino Faso ay u socdaashay Koonfur Africa iyagoo aan marnaba guul ka soo hoynin 21 ciyaar ee koobka qamaramda ee ay horay ugu ciyaareen dhulaal ajnabi ah.
Balse isbadal ayaa dhacay markii guul taarikhi ah ay ka soo hooyeen ciyaartii ay la dheeleen Itoobiya oo ay uga badiyeen 4-0.
Ciyaaryahanka baalaha ka dheela waxa uu dhaliyey seddax ka mid ah afrtaasi gool. Waxa uu sidoo kale sabab au ahaa guushii ay Burkono Faso ay ka hanatay kooxda Togo ciyaartii sided dhamaadka. Taasi waxa ay u suuragalisay Burkino in ay gaarto afar dhamaadka ciyaarta markii ugu horeeysay tan iyo markii ay martigalisay tartamda sanadii 1998-dii, iyadoo Pitroipa oo 11 sano jir ah uu daawaneyey ciyaaraha.
. Pitroipa waxa uu sheegay in tartankii sanadka ee koobka Qaramda Qaarda Africa in uu u ahaa mid wax qabdkiisa muujiyey sarena uuu u qaaday kalsoonida uu isku qabo.
Kalsoonidaasi ayaa waxa ay ku dhiiragalisay in wacdaro ka dhigo ciyaaaraha isreebreebka koobka aduunka.
Iyadoo ay kooxda qaranka Burkino ay ugu dhibco yareyd Groupk ay ka tirsaneyd ayaa afar guul oo laba gool uu u suuragaliyey Pitroipa ay kor u soo qaaday Burkino oo waligeed aan u soo dhawaanin in ay ku soo baxdo isreebreebka koobka addunka.
Kooxda Stallions waxa ay Algeria ku hoggaamisay 3-2 ka hor inta asyan dhicin lugta labaad ee ciyaartooda oo ka dhici doontao Algeris 19-ka bisha November. .
Pitroipa sandkan waxa ay u aheyd sanadkii uu ugu gool dhalin badnaa mid kamid ah horyaalada ugu waaweyn qarada Yurub. Waa labada sabab oo ay tahay in ciyaaryahankan loo aqoonsada sandkan in uu yahay ciyaaryahan sanadka ee qarada Africa.